Ngenisa iiFidi zikaGoogle Reader zakho kwiiTechnorati Favorites | Martech Zone
Ngenisa iiFidi zikaGoogle Reader zakho kwiiFavororati Favorites
NgoLwesibini, Aprili 17, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Enye yezinto ezikwi-Technorati's simo algorithm kukuba zingaphi ezinye iibhlog ezigcine ibhlog yakho njengeyona uyithandayo kwiakhawunti yabo yeTechnorati (ungongeza eyam apha).
Ukuba usebenzisa uGoogle Reader okanye omnye uMfundi weSondlo, eneneni kukho indlela elula yokongeza zonke izinto ozithandayo, nangona! Ungathumela ngaphandle i I-OPML ifayile kumfundi wakho kwaye uyingenise ngokulula kwiTechnorati:
Ukuthumela ngaphandle I-OPML isuka kuGoogle (ikhonkco elisezantsi lasekhohlo):
Ukungenisa eyakho I-OPML fayile kwiintandokazi zeTechnorati:
Ikhonkco: Ngenisa eyakho I-OPML ifayile kwiintandokazi zeTechnorati.
Chukumisa iiNdwendwe zakho zeWebhu ngokuQinisekiswa kweFom yexesha lokwenyani
Nkqu nabafana abakhulu bayakulibala ukusebenziseka!
Epreli 17, 2007 ngo-4: 37 PM
Ndikhe ndacinga ukuba ndingayenza njani le nto, kwaye bendicinga ngokwenza iapp.
Ingcinga yam kuphela kukuba oku mhlawumbi akukuphathi kakuhle ukutya kwe-Feedburner?
Epreli 18, 2007 ngo-7: 36 PM
Ukuba isondlo esixeliweyo kwiTechnorati sihambelana nesondlo seFeedburner siyakwenza oko. Yenza umdlalo othe ngqo phakathi kwedilesi yokutya kwifayile yakho ye-OPML nakwi-Technorati.
Dec 26, 2007 ngo-6:58 PM
Hee, ndiyazi ukuba esi sisithuba esidala, kodwa ndisandula ukusisebenzisa ngoko, siluncedo kakhulu, enkosi 🙂
Dec 26, 2007 ngo-9:34 PM